Taariikh Nololeedkii Xildhibaan Saciid Xuseen Nuur Dirir – Goobjoog News
Taariikh Nololeedkii Xildhibaan Saciid Xuseen Nuur Dirir
Saciid Xuseen Nuur Dirir, Waxaa uu ku dhashay Goobweyn oo ka tirsan degmada Burtinle ee gobolka Nugaal 1962, Barashada Quraanka Kariimka isla magaaladaas ayuu Dirir 1970-kii ka bilaabay, Waxbarashadii dugsi hoose dhexe waxaa uu dhameeyay sanad dugsiyeedkii 1978/79, magaalada Burtinle ee gobolka Nugaal.
Sanadihii 1981-1983, waxaa uu wax ka bartay kana baxay Dugsiga farsamada gacanta, Muqdishu Polytechnic , qetbta Burco Itb.
Sanadkii 1985-tii, waxaa uu noqday ganacsade, isagoo bilaabay ganacsi iyo shaqo isaga u gaar ah in uu maamulo.
2005-2007-dii waxaa uu ka mid noqday golahga deegaanka Galkacyo, waaxda adeega bulshadada, Sanadkii 2008- xulista iyo xalinta khilaafaadka baarlamaanka xiligaas ayuu ka mid noqday Saciid Xuseen Nuur Dirir.
2012-kii waxaa uu Maareeye ka noqday shirkadda biyaha Baacaadweyn
Sanadkii 2013 waxaa uu sidoo kale Maareeye ka noqday shirkadda isgaarsiinta Orbit , taas oo markii dambe uu ka tagay.
December 31, 2013 xubnaha golaha Wakiilada Puntland isagoo xubin firfircoon ka ahaa Gudiga shuruucda golaha wakiilada.